I-Transformer, i-Distribution Transformer, i-Transformer egxilise uwoyela - i-Fuda
Uhlobo Olomile Transformer
Sikholelwa ukuthi inqobo nje uma uqonda umkhiqizo wethu, kufanele uzimisele ukuba ngozakwethu nathi.
Le nkampani yasungulwa ngo-2000. Ngemuva kweminyaka eyishumi yemizamo nentuthuko, sekuyibhizinisi elikhulu kakhulu esifundazweni.
I-5kV transformer kanye ne-S9 transformer elandelayo, i-S11 transformer chungechunge kawoyela ogxilise amandla ombane:
Le nkampani isidlulise ngempumelelo ukuhlolwa kwezinga lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 / 2000 elicwaningwe yinkampani iMody ngoJanuwari 2010
I-Shandong Fuda Transformer Co., Ltd. inikeza izinsizakalo ezahlukahlukene zangemva kokuthengisa kusuka kwinsizakalo yokugunda, isheke elijwayelekile, ukugcinwa nokulungiswa.
I-Shandong Fuda Transformer Co., Ltd.yinkampani egxile ekukhiqizeni, ekuthuthukiseni nasekuthengiseni ama-dry-type transformers, ama-transformer kagesi, ama-transformers acwiliswe ngamafutha, ama-amorphous alloy transformers, ama-10kV transformers, ama-35kV transformers, ama-transformer ebhokisi nemikhiqizo esekelayo.
Imikhiqizo eyinhloko yenkampani: i-35kV transformer kanye ne-S9 transformer elandelayo, i-S11 transformer chungechunge kawoyela ogxilise amandla ombane: Ama-transformers afakwe ngaphambili (i-European, American), ama-transformer akhethekile, njll.
Imishini ephelele yenkampani nobuchwepheshe bokwenza izinto, izindlela eziqinile zokuhlola, amandla aqinile wezobuchwepheshe, isimo sengqondo sokuklama nesayensi, ziqinisekisa ukuhlinzeka amakhasimende ngobuhle, ikhwalithi ethembekile, ukusebenza okuphezulu kwemikhiqizo kagesi.
Isitayela saseMelika se-transformer yebhokisi
Isitayela saseYurophu se-transformer yebhokisi
SH15 uchungechunge ingxubevange amorphous ebiyelwe ngokugcwele tran ...
S9-M S10-M S11-M S11-MR isiguquli sokuhambisa
14 Ephreli 2020, Ngokwesisekelo semibhalo eshicilelwe kuwebhusayithi esemthethweni yeShandong Supervision Bureau of the State Energy Administration —— isinqumo seShandong Supervision Bureau of the State Energy Administration sokunikeza ilayisense yokuphatha (Shandong Supervision quali .. .
Eminyakeni yamuva nje, kwenziwe impumelelo emangalisayo ekuthuthukisweni kwamandla kagesi okusha komhlaba, futhi ukuthuthukiswa komkhakha wamandla omusha omelwe imboni yokukhiqiza amandla kagesi i-photovoltaic sekungene ngokushesha. Ngeminyaka engu-31 yesipiliyoni kumandla we-transmi ...